Fitsangatsanganana any Roma miaraka amin'ny ankizy | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Roma, Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Ankehitriny ny fianakaviana tanora dia mandeha miaraka amin'ny ankizy, ary maro no mihevitra fa tsy misy toerana eto amin'izao tontolo izao izay tsy azo vangiana miaraka amin'izy ireo. Izany ve? Manana ny fisalasalako aho, saingy heveriko fa ny toerana sasany dia tsara kokoa noho ny sasany. Ohatra, Afaka mandeha any Roma miaraka amin'ny ankizy ve ianao?
Eny ny valiny, na dia tokony hipetraka ianao ary hijery izay tolotra omen'ny tanàna ho azy ireo satria liana izy ireo, marina izany, saingy mety tsy mahaliana azy ireo loatra ny tantara na ny kanto. Mikasa. Izay ilay teny raha miresaka mandeha miaraka amin'ny ankizy.
Roma miaraka amin'ny ankizy
Roma dia iray amin'ireo renivohitra lehibe any Eropa ary manana tantara an-jatony izay hita isaky ny zoro. Olona tia tantara na zava-kanto mahatalanjona mamakivaky ity tanàna ity, fa ahoana ny amin'ireo kely?
Nilaza izahay etsy ambony fa mila manendasa ianao ary izany no izy. Tsy tian'ny ankizy ny andalana lava na miandry ka toro-hevitra mividy tapakila mialoha hialana amin'ny fiandrasana ela. Ny zavatra voalohany, avy eo, dia fantaro ny Colosseum. Azo jerena amin'ny Internet ny tapakila, fa raha tsy anananao izany, dia vitsy kokoa ny olona miditra amin'ny Forum na ny Palatine Hill ka afaka manararaotra ianao mividy azy eto.
Misy karazany marobe ny fitsangatsanganana notarihinas ary afaka misafidy fitsangatsanganana karazana fianakaviana amin'ny Colosseum sy ny Forum ianao. Matetika ireo rava dia tsy mandiso fanantenana, mainka ny Colosseum miaraka amin'ny fahalehibiazany lehibe. Ho tian'izy ireo izany! Indrindra fa ny fitsangatsanganana dia mitondra azy ireo any amin'ny lakaly any ambany na any amin'ny faritra avo kokoa izay tsara kokoa ny fomba fijery.
Tsy nilaza an'izany izahay fa ny Colosseum, ny Forum ary ny Palatine Hill dia samy manana ny tapakila mitovy ka mitohy eto ny fitsidihana, miaraka amin'ny faharavana bebe kokoa. Raha tsara ny andro dia any ivelany ny trano, ka tsara tarehy. Ny fanaovana ireo fitsidihana telo misesy dia mety mandreraka ka mora kokoa ny misakafo antoandro eo anelanelan'izy ireo mba hahafahan'ny ankizy miala sasatra.
Ny Colosseum dia tena feno fa ny Forum dia andiana rava tsy voarindra ary misokatra amin'ny fisainana. Ny hevitra tsara dia ny mampiseho azy ireo alohan'ny hitetezana ny endrik'ilay Forum taonjato maro lasa izay na sintomy amin'ny findainao io sary io mba hahafahana milalao sy mampitaha. Ny fiafarana tsara indrindra amin'ity fitsidihana telo ity dia ny famitana eo an-tampon'ny havoanan'i Palatine izay ahitanao ny fahitana tsara an'ireo tranonkala roa hafa.
Eo anelanelan'ny Colosseum sy ny Monument Vittorio Emmanuel dia misy arabe malalaka sy lava. Mandeha mamaky eto ianao dia afaka mahita ny sisa tavela amin'ny Tsenan'i Trajan izay naorina manodidina ny 100 AD ary toerana fivarotana sy birao manodidina ny 150 no niasa. Tranokala tokony ho hita izany. Akaiky koa dia ny Circus Maximus.
Nisy ny Circus Maximus taloha hazakaza-kalesy. Androany no nodimandry tao anaty tany lava sy tery ny soritra lehibe. Amin'ny fisainana kely dia afaka mamerina ireo hazakazaka mahafinaritra sy mitabataba amin'ny fomba Ben-Hur tsara indrindra ny olona iray. Indraindray koa ny hetsika dia atao ao anatiny, ka raha izany no izy dia afaka manatona sy mandehandeha ianao.
Eo akaiky eo koa misy rava iray sisa: ny Fandroana an'i Caracalla. Tsy maintsy ho nanan-karena izy ireo, saingy rindrina mitsangana vitsivitsy sy sisa tavela amin'ny kamory miaraka amin'ny mozaika ihany no tavela. Goavana ny loharano mafana ary tsy lavitra ny 15 minitra miala ny Circus Maximus. Eo am-baravarana matetika dia misy fivarotana mivarotra gilasy, tena matsiro, mba hahafahanao manao "fijanonana teknika" eto izay hankafizin'ny ankizy.
Ireo fandroana mafana ireo dia naorin'ny Emperora Caracalla tamin'ny taona 217 taorian'i JK. Tamin'ny fahalavoan'i Roma tamin'ny fotoana maharitra dia namaky ny lakandrano nitondra ny rano, nanomboka nampiasaina ny olona tsy manan-kialofana tamin'ny Moyen Age, ny sasany dia naka vato hananganana trano ary raha fintinina, izany no nahatafavoaka izany andro Ny zavatra tsara dia misy fambara eny rehetra eny milaza an'io tantara io mba hahafahanao mitantara izany amin'ny zanakao.
Ho fanampin'izay, taona vitsivitsy lasa izay dia nampiditra a fitsangatsanganana zava-misy virtoaly. Ny fitsangatsanganana dia horonam-peo ary afaka jerena ny toetran'ireo fandroana faran'izay tsara. Tsy hadinon'ny zaza izany, sa tsy izany?
Heveriko fa amin'ireo toerana ireo dia rakotra Roma taloha ho an'ny ankizy. Raha manam-potoana bebe kokoa ianao, dia afaka manofa bisikileta foana ianao ary mandeha mitsangatsangana amin'ny làlan'ny Appian na mitsidika villa amperora kanto, saingy miaraka amin'ny fotoana kely na amin'ny ankizy tsy dia liana loatra amin'ny Romana taloha, dia ampy izay. Tsy maintsy miroso amin'ny ankehitriny ianao Roma Kristiana ary eto indray dia betsaka ny zavatra ho hitanao ka tsy maintsy misafidy ianao.
Afaka manomboka amin'ny Vatican izay fon'ny katolika. Afaka mankany amin'ny kianja ianao ary mamakivaky ny fivarotana manodidina azy na afaka maka dingana lavitra ianao mitsidika ny tranombakoka Vatican. Ireto misy harena avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ary misy ny malaza Sistine Chapel. Afaka mandeha an-tongotra mandritra ny ora maro ny olona ary tsy hahafantatra ny zava-drehetra, marina izany, saingy tsy hevitra ratsy ny mividy tapakila sy filaharana. Misy fitsangatsanganana ho an'ny ankizy.
La Masindahy Masindahy Peter Izy io dia afaka manidy ny fitsidihana an'i Vatican ary ny sary miaraka amin'ny Swiss Guard dia mety ho fahatsiarovana tsara indrindra. Raha manana angovo ny ankizy dia afaka miakatra eo an-tampon'ny dome fiangonana ianao ary mijery an'i Roma. Zavatra iray tsy hay hadinoina koa.
Na aloha na aorian'ny Vatican dia azonao atao ny manatona ny Castel Sant'Angelo. Eo alohan'ny fidirana dia misy tetezana voaravaka sarivongana. Ny lapa dia trano mimanda papaly ary misy tionelina miafina mampifandray azy amin'ny Vatican. Androany ny tranombakoka iray dia miasa ary manana teras malalaka misokatra ihany koa izy hahitana fomba fijery tsara amin'ny zava-drehetra. Ary ahoana ny Pantheon? Eto i Roma taloha dia mihaona amin'i Roma Kristiana.
Izy io dia iray amin'ireo trano romana klasika tsara notehirizina ary nanomboka tamin'ny taona 120 AD. Ny ao anatiny dia be voninahitra sy tara-masoandro na orana miposaka avy ao anaty lavaka ao an-tampontrano, raha tsy vintana ianao ary avy ny orana amin'ny andro fitsidihanao. Eto i Rafael miala sasatra ka tsy maintsy mikaroka sy mahita ny fasany alohan'ny andehanana ianao. Ary farany, any ivelany dia be ny toerana fisakafoanana na fisotroana zavatra ka toerana tsara hafa ipetrahana.
Mazava ho I Roma dia tanàna feno fiangonana. Raha nahita zavatra aho dia tsara tarehy daholo izy ireo ary maro no afaka sy tsy fantatra. Akaiky ny Forum dia misy fiangonana kely sy tsara tarehy roa, fa raha mila zavatra malaza kokoa ianao dia misy Santa Maria Maggiore miaraka amin'ny kanto mozika manaisotra ny fofonao ary ny iray hafa mety mahaliana dia ilay kely Fiangonan'i Santa Maria any Cosmedin.
Eto no misy misy ny Vavan'ny Fahamarinana malaza, alohan'ny fananganana ny fiangonana mihitsy. Hitanao eo akaikin'ny Circus Maximus, ao amin'ny Plaza de la Boca de la Verdad izany. Raha tian'ny zanakao izany ny macabre Ny crypt dia tokony ho ao amin'ny lisitry ny zavatra hotsidihina miaraka amin'ny ankizy any Roma. Afaka misafidy ny Crypt an'ny moanina Cappuccinos, tranokala misy efitrano enina feno taolam-paty ary taolam-paty sasany izay toa mamanay.
La Villa Borghese sy ny zaridainany, ny Trevi Fountain ary ny fitsangatsanganana sasany mankany ivelany dia azo ampidirina ao. Ostia Antica, ny Rava Pompeii na lavitra, Florencia, efa akaiky.
Heveriko fa Ilaina ny fandrindrana rehefa mandeha miaraka amin'ny ankizy Azonao atao ny mandamina ny vakansy tsara indrindra amin'ny fiainany amin'ny fanomezana azy ireo traikefa. Tsy ny mandeha fotsiny na ny mahita fa ny manao: mitaingina bisikileta amin'ny Via Appia, milalao gladiatera ao amin'ny Colosseum, misoratra anarana amin'ny kilasy pizza na paty ...
Aza mandositra mandeha miaraka amin'ny ankizy. Mety hangatsiaka izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy » Fitsangatsanganana any Roma miaraka amin'ny ankizy
Inona no ho hita ao Wroclaw